Wasaaradda arrimaha dastuurka iyo madaxda ururada bulshada rayidka oo kulan yeeshay | Somali National Television - sntv.so
Home SAWIRO Wasaaradda arrimaha dastuurka iyo madaxda ururada bulshada rayidka oo kulan yeeshay
Wasaaradda arrimaha dastuurka iyo madaxda ururada bulshada rayidka oo kulan yeeshay
Shir u dhaxeeyay Wasaaradda Arrimaha Dastuurka ee Xukuumadda Federaalka Soomaliya iyo Ururada Bulshada Rayidka ayaa ka dhacay Xarunta Wasaaradda, shirka ayaa ahaa mid loogu diyaar garoowayo shir afar maalin socon doona oo beri ka furmi doona magaalada Muqdisho.
Agaasimaha Guud ee Wasaaradda, qaar kamid ah Lataliyayaasha iyo Agaasime Waaxeedyada Wasaaradda ayaa kulanka la yeeshay Madaxda Urarada Bulshada Rayidka oo soo booqaday Xarunta Wasaaradda, kuwaasoo ka kala yimid dawlad goboleedyada dalka.
Wasaaradda ayaa waxa ay qabanqaabisay kulan beri ka bilaabmi doona Muqdisho oo ujeedada laga leeyahay ay tahay in lagu diyaariyo Istiraatiijiyadda Waxbarashada Madaniga, Wacyi Gelinta Bulshada, iyo Latashiyada Dadweynaha ee dib-u-eegsita Dastuurka, Kulankaa oo ay door weyn ka qaadan doonaan Bulshada Rayidka ayaa madaxdooda iyo masuuliyiinta Wasaardda isku afgarteen in uu noqdo mid ay ka soo baxaan talooyin la mahdiyo.
Ugu dambayn, waxaa ay labada dhinac isku fahmeen in Istiraatijiyooyinka ka soo bixi doona shirka beri furmi doona ay noqdaan kuwo ay ku hawlgalaan dhamaan Ururada Bulshada Rayidka ee ka qayb qaadan doona Geedi-socodka dib-u-eegista Dastuurka.
Previous articleWasiir Beyle oo uga mahadceliyey xildhibaanada ansixinta misaaniyadda
Next articleGolaha shacabka oo ka doodaya moshin ku saabsan Badeecooyinka Dalka la keeno